Iseti yeManicure - Yenzelwe ntoni into nganye? | Bezzia
USusana godoy | 20/06/2022 10:06 | Ubuhle
Siyathanda ukuba izandla zethu zihlale zicocekile, kuba nazo zihlala zithetha kakhulu ngathi. Ke, ukuba ungomnye wabo bazama iintlobo ezahlukeneyo zoyilo kunye nemibala, lixesha lokuba uthethe malunga iseti ye-manicure. Ngaba uyazi ukuba isixhobo ngasinye senzelwe ntoni?
Kuba ibingazukuba sisihlandlo sokuqala sithenga i iseti ye-manicure kwaye sicinga ukuba asiyiyo yonke into esiya kufumana umdlalo ofanayo. Ke ngaphambi kokuba singene phambi kwethu, kuhlala kungcono ukwazi ukuba iqhekeza ngalinye lenziwe ngantoni liza kusetyenziselwa kwaye ngokuqinisekileyo ukusukela ngoko siya kuba nakho ukonwabela ngokuphindwe kabini.
1 Iseti ye-manicure: i-nail polish
2 Isixhobo se-cuticle pusher
3 I-Cuticle nippers kunye nesikere
4 abaphihli beziphopho
5 imela enoboya
6 Izixhobo ezidibeneyo
Iseti ye-manicure: i-nail polish
Esinye sezixhobo esihlala sizifumana kuyo yonke isethi ye-manicure yile. Inemilo engunxantathu phezulu kwaye kuyinyani ukuba asisoloko sisazi ukuba yenzelwe ntoni, kodwa siya kukuxelela ukuba kukucoca izikhonkwane. Ngenxa yokuba emva kokusika okanye ukuwafaka, ukungcola okunye kunokuqokelela phantsi kwabo kwaye esi sixhobo sinendlela efanelekileyo yokuyisusa. Ngaba uyisebenzisa rhoqo?
Isixhobo se-cuticle pusher
Ngenxa yokuba asifanele sisoloko sinqumla i-cuticles yezikhonkwane. Kukho amaxesha amaninzi xa siye kukhangela i-manicure kwaye sibona indlela amaziko obuhle anawo isixhobo sokutyhala i-cuticle ngaphandle kokuyisusa. Ukwenza oku, udinga isixhobo esine-spatula okanye i-spoon shape, ejikelezwe phezulu. Ke i-cuticle iya kususwa, ngakumbi xa le ndawo inzima kakhulu. Ngoku iya kuba lixesha lokuba siqale nge-manicure yethu ngokwayo!
I-Cuticle nippers kunye nesikere
Kwakhona kwi-cuticles siya kuba nezixhobo ezimbini eziphambili. Ngakolunye uhlangothi, i-scissors, eya kuba yizona zineengcebiso ezibukhali kunye nezigqwesileyo, kunye nokugqiba okugobileyo. Ewe, ngokubabona nje, siya kuqaphela umahluko kunye nesikere esiqhelekileyo. Ngenxa yokuba ezi zincinci ngoko ke zenzelwe ukusika kuphela i-cuticles. Ngelixa iipliers nazo zenza umsebenzi ofanayo kunye nesikere, kodwa ngomphetho obukhali kakhulu ukukwazi ukusika ulusu oluthi.
Ewe, ukuba sithetha malunga ne-cuticle nippers, asifuni ukuba abaqholi beenzipho bashiywe ngasemva. Zikulungele ukukwazi ukusika kunye nokubumba izikhonkwane. Kodwa zenzelwe ezo zikhonkwane ezityebileyo, zombini ezandleni nasezinyaweni. Ngoko ke, ukwenzela ukuba ungonakalisi indawo yokuphathwa, khumbula ukuba isetyenziswe kuphela kule meko xa kukho indawo edibeneyo yesikhonkwane esingenakunqunyulwa ngesikere.
Kukho esinye isixhobo esinokuthi singasebenzisi kakhulu, nangona kwezinye iimeko siya kuba sisiseko. Xa sinolusu oluthe lwahlukana nendawo yeenzipho, siya kusebenzisa le mela. Nangona ingabunjwanga njengemela njengoko sisazi. Imalunga ne intloko enencakuba ecikizekileyo, emile okwekama elisicaba. Ngokuyidlulisa nje, siya kube sisusa ezo zikhumba sele zivaliwe, ngaphandle kwengxaki enkulu. Ngamanye amaxesha, ngaphakathi kweseti ye-manicure sifumana enye efanayo kodwa enomfanekiso 'V'. Zombini zinomsebenzi ofanayo.
Ngamanye amaxesha siphinde sibone ukuba njani isixhobo esifanayo sinentloko ephindwe kabini, endaweni yokuba ibe nye. Kodwa akukho nto inokumangaliswa ngayo kuba iya kuba nenjongo efanayo neyezinye zezo besigqabaza ngazo. Oko kukuthi, kunokubakho enye ehlambulula izikhonkwane kwaye iqhube i-cuticles ngexesha elifanayo. Ke ngesi sixhobo nje, sinokwenza imisebenzi emibini ngexesha elinye.
Kuyacaca ukuba iifayile zezikhonkwane ziya kubonakala kwiseti ye-manicure, sonke siyazi kakuhle, kunye ne-tweezers kunye ne-nail clippers.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Iseti yeManicure - Yenzelwe ntoni into nganye?
I-Renaissance, icwecwe elitsha likaBeyoncé, sele linomhla wokuphuma